Nhoroondo yaMambokadzi Pokou - Afrikhepri Fondation
Muvhuro, Kurume 1, 2021
Nhoroondo yeMambokadzi Pokou
Abla Pokou ndiye muzukuru waMambo Ossei Tutu weAshanti Confederation yeGhana. Emperor Tutu, muvaki mukuru, vakawedzera simba kunoshamisa kuumambo uye vakaita dunhu rakapfuma reKoumassi guta rine matarenda ayo anonzi akavezwa nematare egoridhe. Mushure mekufa kwake kutenderera 1720, mwana wemwana wake wechibereko, Opokou Ware, mukoma waPokou, neimwe nzira vakachengeta kubatana kwenyika. Asi makore makumi matatu gare gare, muna 1749, kunyangarika kweiyo yekupedzisira kwakamutsa gakava rakateerana pakati pehama yake mudiki, akasarudza mugari wenhaka, uye mumwe wevakoma vake, avo vakapisa nyika nemoto neropa.
Apo Prince Dakon akaurayiwa, Pokou, akashamiswa nehondo yehurumende yakanga iri kuparadza Koumassi zvakasiyana, pakarepo akanzwisisa kuti chii chaizomirira imba yehama yake yakaipa. Dzimba dzakatsva, minda yakasimwa, mombe dzakabiwa, dzakapamba zvinhu, dzakamuudza kuti zvakasara chete kuendeswa kunzvenga dambudziko. Akanga atoona kuurayiwa kwakawanda muumambo hutambudzwa! Kurwisana, kushorwa, kutsiva, kurangwa, kubuda: mhuri dzose dzakabhadharwa zvisina utsinye nokuda kwehupenyu hwavo chido chemwanakomana kana kuora kwebaba.
Kuunganidza muchivande madzishe makuru uye anosimudzira mhuri akawanda akazvipira kumhuri yake, akavaudza nezveurongwa hwake. Vakabvuma kupinda pasi pesimba rake. Apo pakarepo mumvuri weusiku wakapararira pamusoro peguta, vakanyarara vachibva kumigaro yavo kune imwe nzvimbo yakakura uye chitubu icho chaive chakanaka varume mazana, vakadzi nevana pamwe nevashandi uye boka revanhu mauto akatendeka, akaenda kunzvimbo yekuchamhembe kwakadziva kumadokero, pasi pekutungamirirwa kwemambokadzi.
Akakotama pasi pezvimedu zvezvokudya uye pfuma yemadzitateguru, vapoteri vakatanga rwendo rurefu vachienda kune vasingazivikanwi. Vakashamiswa nehope dzisina usiku, vakanga vachirasikirwa nemhepo yavo musango, vachikotama nemakumbo avo asina maturo marefu uye akanyangadza humus akavasunga makumbo avo. Hazvina kunyanya kuti vakanga vachizorora mumusasa wekambani kuti vaone imwe yemutambo. Ivo zvakaoma akatora nguva kuti vavige vakafa vavo - vakakwegura yokukurirwa kuneta, vana anobvarurwa-bvarurwa nezvikara inovandira panzvimbo Wake dzavo, walkers vakashinga mowed pasi delirious fivha. Vaifanira kubva zvakare, vachitevera zvakanyanya nemauto ayo mambo mutsva weKoumassi akanga avotora shure kwavo. Ari pamusoro pemutambo, Pokou harangued mhuri yake, achivakurudzira kurwisana nekutya nekuora mwoyo.
Ivo vakazosvika pamberi pegungwa rinodzvova iro rakavatsva nekutya. Comoé yakaumba chigadziro chepakati pekuberekwa kwemadzitateguru avo Ashanti uye nyika itsva: Ivory Coast yakazvipa sechivimbiso chekusununguka. Asi rwizi, rwakapfurikidza nemvura yechangobva kuitika yechando, yakanga isingaiti. Pasi pemhirizhonga dzemvura, magwa ehove vehove akaendeswa kumatsiro akavhurika semashanga. Mavanga akanga atomwa zvakare nemafungu anokwira, achidyara kuparadzwa mumisha yakapoteredza. Fording yakanga isingakwanisi. Zvino muvengi akanga ava kuswedera, akaziviswa nekutaura tom-toms.
Pabhangi, vadiki vakanga vachizorora, miromo yakazaruka kune zuva. Pamuganhu wemvura chakanga chiri kunetseka neboka reibupio raimhanyisa jets yemvura yakawanda. Kutarisa manzwiro emusango mukukwirira uye kutanga, zvinopisa zvinokwira pamusoro pemiti zvakapinda kune vanofamba kusvika kumarongo. Pokou akapinda kumucheto kwerwizi achikurumidza kutakura matanda makuru emiti muzwi rehero uye, achitendeukira kumukayi wake, muchengeti wemitemo tsvene, akamuraira kuti aone mazwi. "Tiudzei kuti chinangwa ichi chinoda kuti tiende. Anoda mapundu ekola here? Chibayiro chezana zana? Nzombe makumi matatu? "
Murume uyu akwegura akazununguka, akawira pasi pamberi pebasa rinokosha renhara-cotta canary apo manamwari emadzitateguru akazorora, ndokuvhara meso ake sechiratidzo chekufungisisa. Kunyarara kwakanyangadza kwakavhiringidzika nemagumisiro akaoma ezvisikwa akanga atora mapoka akabatanidzwa akaumba chikamu chemukadzi, sekunge kuti kuratidza kwaari kuti inomiririra rutivi rwavo rwekupedzisira. Mhepo inenge ichinge ichinge ichinge ichinge ichinge ichitsvaga. Maminitsi ose akaita kuti vawedzere pedyo nemapfupa uye mapfumo ehupfu yevatsvaga. Hapana munhu akatya kutaura shoko. Ngwarira kune ani zvake anotya kushungurudza nhaurirano yakavanzika pakati pomurume wekutenda uye masimba emashiripiti!
Inzwi remurosi rakasimuka pakupedzisira, rakanyorwa nechisimba chisina kujairika. "Mambokadzi, nyanzvi yerwizi urwu inotsamwiswa. Haazofadzwi kusvikira tamupa sechipo chatinoda. " Nokudaro akanga adzidzira mhinduro yemadzitateguru. Vakadzi vacho vakabva vasunungura makumbo eine goridhe uye nenyanga dzenyanga dzenyanga dzenyanga dzenzou dzezvinyorwa zvinodururwa zvinogadzirwa. Varume vacho vakazarura mapuranga akavezwa emapuranga aiva nezvinhu zvisingagoni kuwanikwa. Asi wizard yakanyunyutira musoro wake nekuramba uye yakadzosa zvipiriso zvetsoka. "Kwete! Izvo zvatinoda, "akadanidzira," isu tiri vanakomana vedu! "Vanaamai vakavhunduka.
Asi vakadzi veAshanti vaiziva kuti mune mamwe mamiriro ezvinhu vamwari vaigona kudai kufa kwe mwana. Kubva pane dzidzo uye tsika dzakaparidzirwa naamai vavo navanasekuru, vose vakanga vadzidza kuti zvakanga zvisingabvumirwi kupandukira kana kuchema mwana wechibairo, pamarwadzo ekuona kutsamwa kwevamwari. kuti aparadze rudzi rwose. Apo mweya yemadzitateguru yakataura kuburikidza nemuromo we wizard, chii chakanga chasara kune munhu akafa?
Pokou akakwira dombo rakaumba nzvimbo yepamusoro uye akachema achiti: "Vanhu veKoumassi, ndiani pakati penyu achapa mwanakomana kuruponeso rwevose". Zviso zvakaramba zvakagwamba nechando, miromo yakanyarara, mumwe nemumwe achimbundira vana vavo nemaoko, vanamai vachikurumidza kuviga vacheche vavo pasi pezvikamu zviviri zveKita loincloths. Mwanasikana wamambo zvishoma nezvishoma akatarisa pamusoro pevarombo vanhu vakamukomberedza, sekunge kuti vanotsamwisa kutanga pakati peaya machinda anodada, ava vabereki vane mitsara mirefu yevanakomana, avo vakamupa ramangwana ravo. Akakumbira maziso, achienda kubva kune mumwe achienda kune mumwe, achivimba kuti musoro wemhuri unozvipira iye kupa kunyangwe vashoma vevana vake, mumwe weavo vangangotadza kusvika. kupera kwerwendo rwavo rune njodzi. Asi zvakadaro hapana anozvipira akanongedzera kubva kune vazhinji vanotya.
Akabva aenda kumucheto kwerwizi ndokusunungura mwana akatakura musikana wechidiki mushure make. "Kouakou, mwana wangu oga! Ndakanzwisisa kuti ndinofanira kupa mwana wangu kuti aponese rudzi urwu. Zvaiva nekuda kwemhuri yangu kuti vaifanira kutiza. Ko mambokadzi anopfuura kupfuura mambokadzi uye kwete mudzimai kana amai here? "
Pfungwa dzake dzakagara kwenguva pfupi pamakore iwayo akareba ekuora mwoyo panguva iyo dumbu rake rakanga risina chinhu; iyo shamwari dzaive dzave dzakakosha kuti dziparadzanise nokuti mbeu yavo yakanga isina kuita kuti iite; kunyadziswa kunonzwa apo kushora kugunun'una kwakamuka kwave kuchivhiringidza kunonoka kutuka kwekushaya simba. Uyu muzukuru waaida zvikuru wemadzimambo akakanganisa, aive kubva muropa rake raaizozvarwa, maererano netsika, kuti vagare nhaka yechigaro cheushe. Asi tarisai, kukudzwa kwokuberekera mambo wamangwana hakuna kubvumirwa. Kwemakore, mwoyo wake wakange waoma pasi pekurema kwehasha, kusvika apo avo vekare vaishamwaridzana havana kutya kunyange kuuya nekuzivisa vana vavo.
Uye yaiva mumazana makumi mana, apo vakadzi vezera rake vakava vanasekuru, kuti chishamiso chakanga chaitwa. Kubatana kwake kwekupedzisira kwakaguma kubereka zvibereko. Icho chaAsoué Tano, mukomana wechidiki uyo akauya kuzomusunungura kubva pamasango eSefwi mambo akanga akavakidzana uyo akanga amutora musungwa mushure mokurwisa Koumassi. Uyu mwana anonyanya kukoshesa, akagamuchirwa sechipo chinobva kudenga, akanga akaita sese inokurudzira yemuviri wake wakwegura. Akanga ariwo iye oga nyaradzo apo, akabatwa nehondo iyi yakaipisisa yekutsanangurira iyo yaizomukandira mumigwagwa yekudzingwa, murume wake akabhadhara nehupenyu hwake hukama husingagumi nemadzimambo mukunyadziswa. Uye zvino chii chakasara kwaari? Vanhu ivavo vakanga vakamirira zvinhu zvose kubva kwaari? Ndapota! Ichi chiroro chiduku chakanga chisina makore matatu. Ndapota! Imwe mukati inoteterera kuti hakuna munhu akanzwa. Uye hakuna munhu akamboona chiso chake kutaura kwekunetseka kusinganzwisisiki kwakaputsa mwoyo wake. Havana here tsitsi kune vanotora chirikadzi inotambudzika kuti igobayira mwana wayo oga?
Zvishoma nezvishoma kumanikidza mushandi wechidiki mumisodzi iyo yakanamatira kumucheche, mhandara yakamutsa mwanakomana wayo pamusoro pake sekuti inofungisisa iye yekupedzisira nguva.
Akariputira pachipfuva chake chisina kuoma, akafukidzira mamwe maoora akapararira pano neapo, akarova zvigunwe zvake pamapanga emutsipa mutsvuku, akanyorova ruoko rwake pamaoko uye makumbo maduku akasimba uye, Kamwe kamwe akatendeuka musoro wake, akamuisa zvakashata mumaoko emawizard, uyo, kunze kwekuremekedza, akanga asina kutya kuvhara iyo nguva inotyisa yorudo.
Haana kutenderera chero imwe nguva apo iyo yekupedzisira, mushure mekutsvaira kwakakwana pamuviri wemwana neminamato kune kubwinya kwemadzitateguru, yakakwira pamharadzano uye yakamhanyira mwana mumafungu, pasi pekunyanya kukuru kwekutsvaira.
Inzwi remusango rakangoerekana risina kunetseka. Sezvo kana nemashiripiti, mvura yeCooé yakanyarara uye nguva shomanana gare gare iyo korona yeEksodho inogona kupfuura! Nechishamiso chipi? Hatizivi zvakawanda. Maererano nedzimwe tsika dzekutaura, guru guru-muiti webhandi rakasvibirira rwizi rwakanga rakabata chitunha pakati pemabhanki maviri kupa bhiriji kuvanhu vePokou. Apo vekupedzisira vevakatapwa vakanga vazosvika kune rimwe bhangi, zvinonzi mucheki-maker akadzurudzwa kamwechete uye kuti rwizi rukadzokazve rutsamwa rwaro rune hasha, ruchimhanya mumhanho wevatsvaga vanoshamisa.
Vachisarudzira nyika yavo nyowani, vanokudzwa vakakumbira Pokou kubhabhatidza humambo hwake hutsva. Uye iye aigona chete kuzevezera mune kuchema: "Ba kana li", ndiko kuti: "Mwana afa. Mukuremekedza chiito chake chegamba, vatungamiriri vemhuri vakabva vabvuma kutumidza zita redzinza ravo zita rekuti Baoulé.
Reine Pokou: Concerto yechipiriso
2 nyowani kubva ku € 12,50
4 yakashandiswa kubva ku12,28 €
Tenga € 12,50
Pokou, Ashanti muchindakadzi
Tenga € 3,05
Iyo Yechokwadi Nyaya yaMambokadzi Abraha Pokou: Iwo maBaoulés kubva kuGold Coast kuenda kuIvory Coast
Tenga € 8,43
Mambokadzi Pokou (Chirungu Chinyorwa)
Tenga € 5,87
6 yakashandiswa kubva ku16,48 €
Tenga € 16,48
Yakapedzisira kugadziridzwa munaKurume 1, 2021 2:58 PM
2025, iyo kuchinja kune dzimwe nyika dzeKama
Pane mhinduro yemweya kumatambudziko ako ese - Wayne Dyer (Audio)